Mweghachi ọhụrụ maka njem nlegharị anya nke Italy ka ọ bụrụ ihe ruru ijeri euro 1
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Mweghachi ọhụrụ maka njem nlegharị anya nke Italy ka ọ bụrụ ihe ruru ijeri euro 1
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Otu ụlọ akụ Intesa Sanpaolo agba mbọ inyere ndị SME aka ịgbake
1 Ijeri Euro maka mgbake njem nlegharị anya Italy
Otu ụlọ akụ mba ofesi Italy nke Intesa Sanpaolo emeela ijeri euro 1 iji kwado mgbake nke obere ụlọ ọrụ na obere ụlọ ọrụ na mpaghara njem. Ọ na-agba ume itinye ego na-aga n'ụzọ nke njem nlegharị anya na-adigide, n'ụzọ kwekọrọ n'ụzọ nke National Recovery and Resilience Plan (PNRR).
Atụmatụ a, na mmekọrịta ya na Sace, otu steeti na-arụ ọrụ na mba ofesi nke ụlọ ọrụ, bụ ntinye aka na mbụ ozugbo. SMEs (obere na nke ọkara ụlọ ọrụ) na ngalaba dị ka akụkụ nke mmemme atụmatụ moto Italiantali. Atụmatụ ntinye ego nke ụlọ ọrụ kredit, na-enye maka ịnyekwu ihe onwunwe maka ijeri 120, nke afọ a malitere na ụlọ elu nke ijeri 50, nke ga-aga iji gbakwunye ego nke NRP nyere maka ịmaliteghachi obodo ahụ. Karịsịa akụkụ nke digitization, mgbanwe gburugburu ebe obibi, njem na-adịgide adịgide, agụmakwụkwọ na nyocha, nsonye na njikọta, na ahụike na-elekwasị anya.
Nkwado nkwado nke otu ụlọ akụ nke Carlo Messina na-edu, kwupụtara ga-akwado SMEs na ngalaba ahụ tumadi na mpaghara 3: ịkwalite na ịba ụba ụkpụrụ nke ụlọ obibi, nkwado gburugburu ebe obibi nke onyinye, na dijitalụ. Usoro ndị enyere site na iwu iwu 43 metụtara usoro njem nlegharị anya PNRR ga-abanyekwa n'ime atụmatụ a.
Enwere ngwọta ego 2 chepụtara n'ọnọdụ a. Nke mbụ bụ Loan Suite, nke emebere maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya chọrọ ebumnuche maka ogo ebe obibi ha. Nke abụọ bụ S-Loan Turismo, nke ezubere iji gbaa ume itinye ego n'ịkwalite mmepe na ume nke akụrụngwa ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ugbua n'ime 2020, Intesa Sanpaolo kwadoro ụlọ ọrụ njem nlegharị anya site na ịgbalite nkwusioru nke mgbazinye ego 70,000 maka ọnụ ahịa ijeri 8 na ịnye ijeri ego ọhụrụ site na ngwaahịa raara onwe ya nye.
“Njem njem nlegharị anya bụ ihe a na-apụghị izere ezere bụ otu n'ime ngalaba ndị ọrịa na-efe efe kacha emetụta. Site na mmalite, anyị nyere nkwado anyị site n'ime ka ijeri euro 2 dị iji gboo mkpa ụlọ ọrụ ngwa ngwa ngwa ngwa, "Stefano Barrese, onye isi Bank of the Territories Division of the Institute kwuru.
Edekwara mmeghachi omume dị mma na atụmatụ a site n'aka ndị nnọchi anya mpaghara njem. "Ihe ntinye aka ọhụrụ nke Intesa Sanpaolo kwupụtara ga-ekwe ka ụlọ ọrụ ntanarị na obere ụlọ ọrụ na mpaghara njem nlegharị anya soro na mgbanwe ahụ. Anyị nwere ekele maka njikere Intesa Sanpaolo dị ịkwado nhazigharị nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ Italy," Onye isi ala Federalbergi, Bernabò Bocca kwuputara.
Dị ka Maria Carmela Colaiacovo, Onye isi oche nke Italian Association of Confindustria Hotels si kwuo, "Ngwungwu ntinye aka nke a chọpụtara bụ nke a kwadoro nke ọma maka mpaghara ahụ."
"Nkwado maka mpaghara spa [nakwa] sitere na Intesa Sanpaolo," Massimo Caputi, Onye isi ala Federterme Confindustria kwukwara.